Rasaasa News – Madaxweynaha Degaanka Somalida oo Sheegay in uu Sixi Wixii Khaldan
Madaxweynaha Degaanka Somalida oo Sheegay in uu Sixi Wixii Khaldan
on March 7, 2012 2:57 pm
London, Mar 7, 2012 [ras] – Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo xalay ka hadlay xaflad kulan oo ka dhacday London, ayaa yidhi “dadku way khaldami karaan waana in ay garwaaqsadaan khaladkooda oo ay saxaan, wixii khaldan waanu sixi” ayuu si kalsooni leh u yidhi madaxweye Cabdi Maxamuud Cumar.
Kulanka waxaa ka qayb galay Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, Safiirka Ethiopia u fadhiya Ingriiska iyo dadweyne badan oo qurba-joog ah.
Dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia oo aad moodo in ay ka muuqato bisayl siyaasadeed ayaan marna jeclayn in ay dibada u soo saaraan khaladaadaka madaxdooda, jecelna in wax walba si farsamo ah lagu dhameeyo.
Dadweynaha Somalida ayaa isweydiinaya in dibad iyo gudaba loo hawl galo nabad iyo horumarin laga sameeyo degaanka Somalida Ethiopia oo ay daashadeen dagaalo aadna uga dambeeya degaanada Ethiopia. In Arimo kale oo horumarineed oo ka baxsan degaanka oo aan si guud Ethiopia uga socon uu galo degaanku su,aalo ayey keentay.
Arinta kale ayaa ah. intii ay socotay doorashada garaadka Absame, ayaa waxaa soo baxay arimo u baahnaa talo wadaag oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah Ugaasyada degaanka Somalida Ethiopia, arintaas oo ay madaxda dawladu kaga jawaabtay xadhig.
Dadweynaha qurbo joogta ah ee degaanka Somalida Ethiopia, ayaa ka codsaday madaxweynaha ka hor intii uusan u safrin Ingriiska in uu siidaayo Ugaas Maxamuud Duulane oo ku xidhan Jijga, lana xidhay intii ay socotay doorashada Garaadka Absame.
Ideecad bbc-da laanta afka Somaliga ayaa madaxweynaha waydiisay su,aalo adag oo intii ay nabadu ka dhacday degaanka, ka dib aan hore loo waydiin, oo ay ku jirtay su,aasha ah Ugaas Maxamuud Duulane maxaa loo xidhay? horumarinta dawlada leh maxaa ka khuseeya qurbo joogta? iyo cabashooyin kale oo ay ideecadu ka soo xigatay hayado caalamiya.
Dadweynaha degaanka Somalida Ingriiska ku nool, ayaa si xoog leh uga qayb galay kulankii iibsiga boondhiga, iyaga oo lacag badan ku iibsaday boondhiga biyo xidheenka Abbay.
Dadweynaha qurbo joogta degaanka ee Ingriiska ayaa kulan ay la qaateen madaxweynaha ku waydiiyey su,aalo la xidhiidha xadhiga Ugaaska iyo arimo kale.
Hadalkii xalay ee madaxweynaha ayaad moodaa in uu jawaab u yahay waxyaabo dhawr ah oo ay daweynuhu u arkayeen in ay khaldameen. Waxaana uu dadweynahu ka hor yidhi “dadku way khaldamaan, laakiin waa in ay khaladkooda saxaan.”
Kalmadahaas madaxweynaha ayaa dadweyne badan oo xaflada fadhiyey ama daawanayey aad u qanciyey, dimoqraatiyada iyo maqalka dadweynaha ee uu muujiyey. Waxaana la dhawri talaabooyinka uu qaado madaxweynuhu kolka uu ku laabto degaanka Ssomalida Ethiopia.
Dadweynaha Somalida ayaa gude iyo dibadba diyaar u ah ka qayb qaadashada nabada iyo horumarinta degaankaSomalida Ethiopia, laakiin aan marna jeclayn in lagu xad gudbo dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia.